Baankiin Hijraa Aksiyoona gurguruu jalqabe - NuuralHudaa
Baankiin Hijraa Aksiyoona gurguruu jalqabe
On Jul 24, 2019 2
Baankiin Islaamaa dhalarraa walaba tahe akka hundeeffamuuf Muslimoonni Itiyoophiyaa yeroo dheeraaf gaafachaa turuun ni yaadatama.
Jijjiirama siyaasaa yeroo dhiyoo as biyyattiitti argame hordofuun, ji’oota muraasa dura Muummichi Ministeeraa Abiy Ahmad Baankiin dhala irraa walaba tahe akka hundeeffamu hayyame.
Baankiwwan dhala irraa walaba tahanii dhaabbachuu barbaadaniis Baankii Biyyooleessa Itiyoophiyaa irraa hayyama fudhachuun gama hojjiitti seenaa jiran.
Baankiin Hijraa, Baankiwwan dhala irraa walaba tahanii hojjechuudhaaf hayyama Baankii Biyyooleessa Itiyoophiyaa irraa argatan keessaa tokko. Baankichi wiixata dheengaddaa ifatti Aksiyoona gurguruu jalqabe.
Hijraa Bank Alhada dabre sagantaa hundeeffamasaa magaalaa Finfinneetti gaggeeffatee ture. Saganticha irratti fuulduraaf Baankiin Hijraa tajaajila Inshuraansii dhala irraa walaba tahe jalqabuuf qophii xumuruusaa ibse.